နောက်ဆုံးရောင်းချနေသည့် Low Voltage DC Miniature Circuit Breaker Quotation
Low Voltage DC Miniature Circuit Breaker Solar system DC MCB ၊ rating current 63A သို့မဟုတ် ထို့ထက်နည်းသော၊ ၎င်းကို DC ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ် စက်ပစ္စည်းများနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများတွင် ဝန်ပိုခြင်းနှင့် ဝါယာရှော့မဖြစ်စေရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ လျှပ်စစ်၊ စာတိုက်၊ အသွားအလာ၊ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းနှင့် နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးတို့တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
Low Voltage DC Miniature Circuit Breaker အတွက် အင်္ဂါရပ်များ
1. သာမိုပလတ်စတစ်အခွံ၊ အပြည့်ဝင်ပေါက်၊ ထိခိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်သော၊ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော၊ ကိုယ်တိုင်ငြိမ်းသတ်ခြင်း
2. အထူးလုံခြုံစိတ်ချရမှု- လိုင်းချိတ်ဆက်မှု ခိုင်မာပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရကြောင်း သေချာစေရန် ဂန္ထဝင် U ဥမင်ဂိတ်
4. ဘေးကင်းရေးလက်ကိုင်၊ ဂန္ထဝင်မူရင်းဒီဇိုင်း၊ ergonomic
Low Voltage DC Miniature Circuit Breaker ၏ DC MCB ကန့်သတ်ချက်များ
ကုသိုလ်ကံ Low Voltage DC Miniature Circuit Breaker
ဝင်ရိုးစွန်း 1P 2P 3P 4P
ဗို့အား 250VDC 550VDC 750VDC 1000VDC
Breaking Capacity 6KA၊10KA
အလုပ်အပူချိန် "-5°" မှ +40°
လျှပ်စစ်ဘဝ အကြိမ် 8000 ကျော်
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝ အကြိမ် 2000 ကျော်
အတိုင်းအတာ(W)X(H)X(D) 18X80X71 ၃၆X၈၀X၇၁ 54X80X71 72X80X71
တပ်ဆင်မှု အမြင့် â‰¤2000M
hot Tags:: Low Voltage DC Miniature Circuit Breaker၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းနေ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်